Isbahaysiga Bulshada - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo joojiyo Hoylaawe
TPCH waxay kafaala qaadaa isbahaysiyo kala duwan oo bulshada ah. Isbaheysigani wuxuu siiyaa shirar furan xubnaha bulshada, la-hawlgalayaasha dowladda, iyo hay'adaha aan macaash doonka ahayn si ay ula wadaagaan ilaha iyo dhaqamada ugu wanaagsan, ugana qayb qaataan tababarka, iyo inay horumariyaan habab iskaashi oo la xiriira meelaha gaarka ah ee diiradda la saarayo.
Isbahaysiga Beesha waxay isticmaalaan goobta TPCH Basecamp. Guji mid ka mid ah magacyada isbahaysiga ee hoose si aad ugu biirto Basecamp oo aad ula socoto shirarka isbahaysiga, ilaha, iyo macluumaadka.
Isbahaysiga Dhallinyarada Guri la'aanta ah: Kani waa isbahaysi bixiyeyaasha adeegga, dhalinyarada, iyo xubnaha bulshada oo si wada jir ah uga shaqeeya ka hortagga iyo joojinta hoy la'aanta dhalinyarada.
Isbahaysiga Gaadhsiinta Bulshada: Isbahaysi wacyigalin ah, xarun maalmeed, iyo uruurinta bixiyeyaasha cuntada oo wada shaqeynaya si ay u bixiyaan kheyraad isla markaana uga caawiyaan dadka ay haysato hoy la'aantu inay ku xirmaan adeegyada iyo guryeynta.
Isbahaysiga Diyaarsanaanta iyo Jawaab-celinta ee COVID-19: Isbahaysi ka mid ah bixiyeyaasha adeegga hoylaaweyaasha, hay'adaha dawladda, nidaamyada caafimaadka iyo habdhaqanka caafimaadka, uruurinta goobaha cuntada, iyo samafalayaasha ka wada shaqeeya wadaagga kheyraadka iyo isku dubaridka jawaabta bulshada ee hoy la'aanta inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19.